Itoobiya: Aabbaha Murannada Biyaha ee Gobolka | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Xuduud lagu muransan yahay: muranno badan oo la xiriira biyaha ayaa waxa sabab u ah goobta ay isha biyuhu ku taallo oo lagu muransan yahay isla markaana labo dal ama ka badan ay sheeganayaan. Dadweynaha oo badanaya: mid kale oo ka mid ah sababaha dabada ka riixi kara inay dhacaan khilaafyo biyeed waa xaqiiqada ah in dadweynaha adduunku, gaar ahaan kan qaaradda Africa uu si heersare ah u kordhayo. Taasi ayaa keenaysa in khayraadkii koobnaa ee biyuhu kow ka ahaayeen la isku qabto, waddamadana damac ka galo gacan-ku-dhigista iyo raadinta ilo muhiim ah oo biyo laga heli karo. Abaaraha soo noqnoqda iyo heerkulka kordhaya: cimillada adduunka ee isbeddeshey awgeed, waxa muuqata in waddamo badan, gaar ahaan kuwa Africa, ay ka yaraanayaan roobabkii ay heli jireen taasina ay keento abaaro joogto ah iyo biyo la’aan. Sidoo kale, heerkulka adduunka ee isbeddeley ayaa saameeya biyaha ku jira webiyada iyo ceelasha maaddaama oo ay si degdeg ah u uumibaxayaan kulaylka badan awgeed. Tan ayaa xoojin karta murannada biyaha la xiriira.